Ukususa imichilo ye-AR - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni We-NAB Show - I-NAB Show LIVE
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Ukususa Imijondolo Ye-AR
Ukususa Imijondolo Ye-AR
By UPhil Ventre, i-VP Sports kanye ne-Broadcast, uNcam
Ngenkathi iqiniso elingathandeki lokusakazwa lisisesigabeni esingajwayelekile, ukusetshenziswa kwalo kugcina kusuka esigabeni 'sethoyizi' elitsha Imidwebo ye-AR iba yingxenye yokuqukethwe kohlelo, futhi izethameli eziyinkimbinkimbi zifuna i-hyper-real, ihluzo ezikholekile ezifakwe ngokuphelele kumvelo yangempela yomhlaba.
Umkhakha wezokusakaza ezemidlalo usemukele kakhulu imidwebo ye-AR ukuthuthukisa uhlelo. Kuzitudiyo zokusakaza, inselelo ukwethula imidwebo efana nedatha yezemidlalo kanye nezibalo ngezindlela ezintsha nezibonakalayo zokudala; ngobuchwepheshe bokulandela ikhamera bokulandela ikhamera njenge-Ncam Reality, manje sebengavumela abasakazi esiteshini ukuthi babonakale behamba bezungeza umdlali enkundleni yegalufu, futhi bangakwazi ngisho nabasubathi be- 'teleport' ukuba babe yizethulo zemiklomelo ukusuka ezinkulungwaneni zamakhilomitha - konke nge ihluzo namaqiniso
Omunye wemikhawulo yokugcina ukulandelwa kwekhamera obhekane nayo endaweni yokusakaza bukhoma isebenza ngokungenantambo. Isixazululo sethu se-AR sasinekhamera nebha yokuzwa inzwa yedatha yemvelo ebuyela kuseva yesoftware yethu ngentambo evalekile; ngenkathi lokhu kulungile emsebenzini we-studio nezikhundla ezihleliwe ku-OB, kunqunyelwe ekusakazweni okubukhoma okuningi.
Lapho i-CBS Sports isondela kithi nomqondo wokubeka imidwebo ebukhoma ekwakhiweni kweSuper Bowl, inselelo bekuwukuhamba nedatha yethu nge-RF isuka ku-Steadicam rig ephondweni libuyele elolini lokukhiqiza. Besidinga ukuthola indlela yokukhulula ukusebenza kwekhamera, sivumele ukuhamba kwamakhamera okuhamba kwamahhala kusebenze kubadlali.
Isixazululo bekuwukufaka umugqa wezinzwa ubheke ku-Steadicam RF rig njengokujwayelekile, kepha kunokuba kuthunyelwe irig kwiseva enkulu yeNcam, kukhishwe ikhompyutha encane. Yize ikhompyutha ihlale inamathele ku-Steadicam rig, ibiyiselula kakhulu futhi ihanjiswa kalula ngumsizi owayekwazi ukuhamba eceleni komphathi weSteadicam futhi asebenzise i-software lapho. Isiginali ye-RF ingabuyiselwa emuva ngaphandle kwentambo kwiloli lokukhiqiza.
Kanye neRF Steadicam ebigijinyelwa enkabeni yenkundla ngaphambi komdlalo, i-CBS Sports iphinde yathela amagobongo amabili avela eNcam AR: i-Steadicam ebekwe phezulu I-GameDay Fan Plaza (isitudiyo esingaphandle phambi kwenkundla iMercedes Benz), kanti omunye u-Technojib onentambo ubekwe enkundleni. Yonke imidwebo yadalwa yi-The future Group.
Konke kusebenze kahle ngosuku futhi ukusakaza kwaba yimpumelelo enkulu, kube nemiphumela engaphezulu komcimbi owodwa e-Atlanta - yize kube nomcimbi omkhulu obukelwe izigidi zabantu emhlabeni jikelele.
Kusukela lapho, besisebenza namaqembu weR & D kwabasakazi abaningi nezinkampani zokukhiqiza, sabelana ngezinhlelo zabo nemigwaqo yethu yokucoca lobu buchwepheshe ukuwavumela ukuthi enze okuningi nge-AR. Ngokwenza ikhompyutha ye-server ibe yincane futhi ibe yisisindo esincane, opharetha bekhamera manje bangayithwala ngokwabo, ibanikeze inkululeko ethe xaxa yokuhamba. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokulandela ikhamera olungenamaki kakhulu luvumela abasakazi basebenzise i-AR cishe kunoma yisiphi isikhala, noma ngabe ngaphakathi noma ngaphandle, njengoba ithatha amaphuzu emvelo endaweni yayo kunokuba bathembele kumamaki ebekiwe.
Ngokuhambisana, ukutholakala kwe5G kusethelwe ukubamba iqhaza elikhulu endleleni ezethunyelwa ngayo imidlalo. I-BT Sport ihamba phambili kulobu buchwepheshe obusha, futhi ibikhipha ngempumelelo isakhi esikude sokuqhamuka bukhoma kude kwe-5G ezinyangeni ezedlule. Amaqembu okukhiqiza azokwazi ukuthwebula izithombe ezibukhoma ezinama-latency ancishiswe kakhulu cishe noma yikuphi ukusuka emcimbini wezemidlalo - ibhasi leqembu, umhubhe, izitebhisi, isikhungo sokwakha - ngokunikeza abaqondisi ithavishini enkulu kunanini ngaphambili ukuxoxa izindaba zabo.
Faka ihluzo ze-AR ezingafakwanga sikhathi sangempela ekukhiqizweni, futhi inkululeko yokudala eseyitholakala kubasakazi iyamangaza.
Ngenkathi ezemidlalo zingumshayeli oyinhloko walezi zinto zobuchwepheshe, zizosiza noma yimuphi umcimbi obukhoma, kusukela ekuhlanganisweni kokhetho (cabanga iSwingometer etholakala ngaphandle kwe10 Downing Street!) Ukusakazwa komphakathi okukhulu.
Ngokuvula amathuba weqiniso elingathandeki ngokulandela ukulandelela kwekhamera okungakhonjwanga kangako, sizobona abasakazi abaningi bemukela amathuba ngalokho okungazuzwa.
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ama-spears nama-Arrows Umlingisi wevidiyo	2019-08-06
Ngaphambilini: I-Pixel Power isiza amakhasimende ekuguqukeni kwezixazululo zesoftware nabaholi abengeziwe bangaphambi kokuthengisa nabaholi bokulethwa kwephrojekthi
Olandelayo: Imikhiqizo ye-TSL Iveza Ukuthuthuka Kwamuva ku-SAM-Q Audio Monitoring Platform entsha ku-IBC 2019